ပုံရိုက်ဖြစ်ဖို့ရယ်၊ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုက်ဖို့ရယ်၊ တင်ဖုိ့ရယ် … အားထုတ်မှု ရဲ့ ရလဒ်ကတော့ အခု ပြပွဲမှာ 21 ပုံဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကြားကနေ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျာ။
ပုံ (၂၂) အနောက်က background က အလင်းများနေတော့ အဲ့ပုံကိုကြည့်ရတာ မျက်စိစူးနေသလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ကြည့်တဲ့သူရဲ့ မျက်လုံးက အဓိက ဇာတ်ကောင် စီမရောက်ပဲ အဲ့ အလင်း စီကိုပဲ ရောက်ရောက်သွားတယ်။
ပုံ (၂၁) က သတင်းပုံ ဆန်နေတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သိပ်မကိုက်ဘူး လို့ခံစားရတယ်။ သတင်းပုံမှာတော့ အဖိုးတန်မယ်ထင်တယ်ဗျ။
ပုံ (၂၀) ကတော့ အထူးပြောစရာ မရှိတော့… ပြောတတ်ဘူး..။
ပြောင်းဖူးကို လှမ်းယူဖို့ ရွယ်လိုက်မိတဲ့ လက်ကို ပြန်ရုပ်လိုက်ရတယ်။
ပုံ (၁၉) ပုံက နဲနဲ ၀ါး နေတယ်ဗျ . subject တွေလဲ ကြိုက်မိတယ်။ subject တွေများတော့ အချင်းချင်းအားပြိုင်ကြရင်း main subject က အားပျော့သွားသလို ခံစားရတယ်။
ပုံ (၁၈) ကြိုက်လဲကြိုက်တယ် .. မကြိုက်လဲ မကြိုက်ဘူး .. ဓာတ်ပုံ က ဓာတ်ပုံ နဲ့တူတာ သဘာဝ ကျတယ်ထင်တယ်။ ပြတ်သားမှု .. မရှိလို့ ပုံက ကောင်းချင်ရဲ့ နဲ့ …..
ပုံ (၁၇) က ကျွန်တော့ စိတ်ထင် နဲနဲ ရိုးနေသလားလို့ ပါ။ ရှုဒေါင့် နဲနဲ ပြောင်းလိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေမလားလို့ ….
ပုံ (၁၆) က မုဖ် နဲနဲ အကျဘက် ရောက်နေတယ်ဗျ ..။
ပုံ (၁၅) အထိုင် နဲ့ မတ်တပ် အားပြိုင်ကြတယ်။ main subject က ထင်ပေါ်နေတယ်။ မတ်တပ် တွေက အထိုင် ကိုကြည့်နေတယ် circular ဖြစ်နေတယ်။ ဒါမျိုးအခိုက်အတန့်ကို မိအောင် ဖမ်းထားဖို့ က ခက်မယ်ဗျ။
ပုံ (၁၄) main subject က ဆန်းတယ်။ အကြောင်းအရာ ဆန်းတယ်။ တင်ပြပုံ မှာ မုဒ် ကိုမမြင်ရဘူး။
ပုံ (၁၃) အကြောင်းအရာက ဆွဲဆောင်မှု နည်းနေတယ်။
ပုံ (၁၂) Focus မိအောင်ဖမ်းထားတာရယ်၊ အလှုပ်ပေါ်ကနေ အလှုပ်ကို ရိုက်ထားတာရယ်၊ retouch ပိုင်းရယ် သဘောကျမိတယ်ဗျာ။ ဒါမျိုးအခိုက်အတန့် ကိုမိအောင် ဖမ်းထားဖို့က ခက်မယ်ဗျ။
စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ဗျာ… ဘာစိတ်မှ မပါပါဘူး ..ထင်တာ တွေ ရေးလိုက်တာပါ။ ငပေါ ရဲ့ မှတ်ချက်လို့ သာ သဘောထားပေးကြပါဗျာ။
22 ပုံ လို့ ပြင်ဖတ် ပေးကြပါဗျာ။
ဒီ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ
သာမန်လူတစ်ယောက်အတွက် ဒါ မျိုး မမြင်တတ်သေးပါဘူး
ကျန်တဲ့ ၁ ကနေ ၁၁ အထိ အမြင်လေးလဲ သိချင်ပါတယ်
တခြား ရွာထဲက ဆရာတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံချင်းအပေါ် အမြင် အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေ ပြောပြမယ်ဆို ရိုက်တဲ့ ကာယကံရှင်အတွက်ရော ဖတ်မိတဲ့ သူတွေ အတွက်ရော အကျိုး အများကြီး ရှိမှာပါ
ဓါတ်ပုံပြပွဲ လုပ်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေလဲ ပို အထမြောက်သွားတာပေါ့
ဒီ ထဲက ပုံ18 ကို ပန်းချီကားကို ပြန်ရိုက်ထားတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်
ဒါက မနိုရဲ့ ခံစားချက်သက်သက်ပါ
ပုံတွေအား လုံး ကို သဘောကျပါတယ်။ ကိုယ် ကတော့ အဖြစ်ရှိအောင် မရိုက်တတ်တော့ ရိုက်တတ်တဲ့ သူအားလုံးကို ချီး ကြူးမိပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ ဦးပေါ်ဦးကိုမြင်းထိန်း ငတာ ချီးကြူးသလို ဖြစ်မှာလည်း စိုးမိပါတယ်။ ကျမ ကတော့ ဖြန့် ကျက် အတွေး ပွားရတာ ကို သဘောကျတော့ ပုံ (၈) ကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပညာ ရပ်ပိုင်းနဲ့ ပက်သက် ပြီးမ ပြောတတ်ပေမယ့် ခံစားမိတဲ့ အတိုင်းပြောရရင်
အဲဒီ ပုံက တွေးစရာတွေ အများကြီး ပါတယ်။ ရောင်းကုန်က ဘာလဲ၊ ပဲပြုတ် လို့ တော့ ထင်မိတယ်။ဒါပေမယ့် မသေချာဘူး၊၊ အိတ်ထဲမှာ ဖက်ခံပြီး ထည့်ထားတယ်၊ချိန်ခွင် နဲ့ ဓါးတချောင်းလည်း ပါတယ်၊ ငှက်ပျောသီးလည်းပါပေမယ့်၊ေ၇ာင်းတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး၊ ဈေးရာင်းရင်း ဆာရင် စားဖို့လား၊ အိမ်သားတဦးဦးတွက် ၀ယ်လာတာလား၊ ဇကာထဲမှာလည်း ၀က်ဆီ ဖက်လို့ ထင်ရတာတွေ တွေ့ ရပြန်တယ်။ အမှောင် ကဲ ထားပြီး အလင်း ပြောက် တွေပဲ လက်တွေနဲ့ ဈေးဗန်းပေါ်ကို ထိုးပြထားလို့ ဘယ် အချိန်မှာ ရောင်းနေ တာလဲ။ ခေါင်းရွက် ဗျက်ထိုး ဈေးသည် ဖြစ်ပြီး အိမ် ထဲက လှမ်းခေါ်လို့ ဈေးတောင်း ကြမ်းပြင် ပေါ် ချပြီးရောင်း တဲ့ ပုံစံမျိုး တွေ့ရတယ်။ ဆက်တွေးရရင် ဈေးတောင်း ပေါ်က တန်ဖိုးနည်း ခြင်္သေ့ လေးတွေ က သူရောင်း ပြီး သလောက် ကို ပြောနေ သလို၊ အရင်းကြေဖို့အမြတ်ရ ဖို့ သူဘယ်လောက် ထိ လျှောက်ရအုံးမှာလဲ…….
တကယ်ကို စကားပြောတဲ့ ဓါတ်ပုံ တပုံ လို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ အကုန်လုံး ကြိုက်တယ်ဗျို့ … လုံးဝ ဟတ်ထိတဲ့ ပုံတွေပါပဲ … ။
ဓါတ်ပုံတွေကို ဗို့ထ်လုပ်တဲ့အခါ .. ဓါတ်ပုံပညာနားမညလ်တော့ … နှလုံးသားနဲ့ ခံစားပြီးပဲ … ဗိုထ်လုပ်လိုက်ပါတယ် … အဟီး :D
ပုံလေးတွေမြင်ရတာ နေရာစုံက ဈေးသည်တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ အကုန်မြင်ရတော့ စိတ်ထဲကို တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်မိတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့ ရိုက်ချက်ကတော့ အလန်းတွေပဲ။ ဆြွာကြီးတွေကြားထဲ မဲမရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတော့ မျက်နှာငယ်စရာပါပဲလေ… ဈေးသည်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲ ပုံလေးတွေက အသက်ဝင်တယ် မယ်တော် ပန်းခူးနေတဲ့ပုံကတော့ ဈေးသည်နဲ့မတူဘူးနော်။ အသုပ်လည်း စားချင်တယ်။ အရုပ်လေးတွေလည်း လိုချင်တယ်။ ပန်းချီဆွဲတာလည်း ရပ်ကြည့်ချင်တယ်… ပြောင်းဖူးပြုတ်လည်း စားချင်တယ်။ နောက်ပြီး သနပ်ခါးလည်း ကုန်ခါနီးတော့ ၀ယ်ရဦးမယ်။ နောက်ပြီး အမေက မှာလိုက်တယ် ကြက်သွန်ဖြူလည်း ကုန်နေပြီတဲ့…. ၀ယ်ချင်တာတော့ အကုန်ပဲ ပိုက်ဆံက မလောက်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့…
နားတော့မလည်ဘူးဂျာ .. အရောင်လေးတွေလှလို့ နံပါတ် ၄ ကိုဗုဒ်လိုက်တယ် .. ဈေးသည် ခေါင်းစဉ်နဲ့တော့သိပ်မလိုက်ဘူး ထင်တာပဲ .. ကျွန်တော်က အရောင် စိုစိုလေးတွေကိုမှကြိုက်တာ .. ကျန်တာတော့ သိပ်မသိဘူးရယ် .. နားလည်တဲ့ ဓါ့ပုံ ဆြာတွေက အဓိက ရွေးရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်ဗျ ..
ကြိုက်တာကတော့ ပုံတွေအကုန်လုံးဘဲ ဘယ်ပုံကိုဗုတ်ရမလဲသေချာစဉ်းစားပြီး ဗုတ်ခဲ့ပါတယ်
ဈေးသည် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့လဲ လိုက်မယ်ထင်တဲ့ အချိတ်ပြောင်းပဲ စားလိုက်တော့တယ်..
ပုံ 12 ကိုကြိုက်တယ်ဗျို့ … ဘီယာဘူးလေးတွေတွေ့လို့ …
တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းကိုပဲ ပဲပြုတ်…..အကြော်စုံသုတ်အစရှိသည် ဖြင့်
ကျနော်အမြင်ကို ရိုးသားစွာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည်.. မှားသွားခဲ့လျှင်လည်း ဓာတ်ပုံဆရာကို ကြိုတင်ပြီး တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ပို့စ်ကို ပထမဆုံး ၀င်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖမ်းအစားဆုံးက ပုံ ၁၈ ပါ။ ဈေးသည်ဆိုတဲ့ subject အပြင်ကိုလည်း ရောက်မသွားဘူး..(ဥပမာ အရီးလတ်ပြောတဲ့ ပုံ ၁၃ လို.. ဟီး.. ဘယ်သူရိုက်တယ်ဆိုတာ သိသလိုလိုရှိလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နောက်တာပါနော်…)
ဈေးသည်လေးရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ရော၊ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားပေမယ်လို့ ရောင်းကုန်လေးတွေလည်း
မြင်ရတဲ့ ထောင့်နေရာက ရိုက်ထားလို့ရော၊ အလင်းနဲ့ အရိပ်ကျနေပုံတွေရော ကြိုက်တယ်။ အဓိက ပန်းချီဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတာလေးကလည်း ရသတခုပေးတယ်ဗျ။ အဲဒီ ပန်းချီဆွဲထားသလိုလေး ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း ဗုတ်လိုက်ဖို့ ကျနော် မရဲခဲ့တာပါ။ ကိုလုလင်ပြောသလို “ဓာတ်ပုံ က ဓာတ်ပုံ နဲ့တူတာ သဘာဝ ကျတယ်ထင်တယ်” ဆိုတဲ့ အစွဲက ဖျောက်မရဘူး။ ဖိုတိုရှော့ထဲမှာဆိုလည်း filter menu အောက်က Crosshatch, Angled strokes..etc ဆိုတဲ့ effect တွေသုံးပြီး ပုံမှန်ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပန်းချီပုံလေးတွေလိုမျိုး လုပ်လို့ရတယ်။ သူကြီးတို့ ဂီတို့ အိုးဆားဗစ်ကြီးတွေ ပိုသိမှာပါ။ ကမ္ဘာကျော် ဓာတ်ပုံသမားတွေလည်း retuoch လုပ်ရတာပဲဆိုတာ လက်ခံသလို၊ အဲလိုလုပ်လိုက်လို့ ဓာတ်ပုံတွေက ပိုအသက်ဝင်လာတာကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုဂီရဲ့ The MG Band။ ဒါပေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖလင်ဆရာသမားတွေရဲ့ အစွဲဟောင်းကြီးလောင်းရိပ်က မိနေသေးတယ်ဗျာ..
ပုံ ၄ လည်း ကာလာ၊ focus၊ အလင်းအမှောင်၊ (အ၀တ်အစားသစ်၊ ပါးကွက်ကြားခြစ်ကလေးနဲ့) သေချာ မော်ဒယ်ငှားပြီး ရိုက်ထားသလို ဟဲ ဟဲ.. အားထုတ်မှုကိုလည်း အမှတ်ပေးမိတယ်..။ တချက်ကလေးပဲ ပန်းသည်မလေးရဲ့ ရောင်းကုန်အပြည့်မပေါ်တာ လိုသွားတယ်။ ခံစားရတာပေါ့သွားတယ်ထင်တယ်..။ နို့မဟုတ်ရင် အဲဒီပုံလေးကို ဗုတ်ပါတယ်..။
ပုံ ၄နဲ့ ၁၈ ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျ။ ပုံ၎ ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တယ်။ကင်မရာလည်းတော်တော်ကောင်း
ပုံတွေကတော့ ရှယ်တွေချည်းပဲ ကျနော်ကတော့ ရွှေဘိုကို သတိရအောင်ဖမ်းစားသွားတဲ့ ပုံလေးကိုမဲပေးလိုက်တယ်ဗျာ
ညီလေး M လုလင် ရေ ကွန်းမန့်လေး က တန်ဘိုးရှိပါတယ်ဗျာ။
M လုလင် ရဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးလို
ဆရာတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်။
M လုလင် အနေနဲ့လည်း ကျန်သေးတဲ့ပုံတွေကို သုံးသပ်ပေးပါဦး။
ကျွန်တော်ကတော့ ပုံ ၂၁ ကို ဘုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မသန်ပေမယ့် စွမ်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ ထီရောင်းတဲ့လှည်းကို
လက်နဲ့တွန်းသွားနေတာက အမှတ်တမဲ့ ရိုက်ထားလိုက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လုပ်ယူဖန်တီးပြီး ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
နံပါတ် ၅ကို ဗုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေမျက်နှာလေးတွေက အရမ်းအပြစ်ကင်းသလိုခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့် ပန်းရောင်နဲ့ခလေးမလေး…ဈေးသည်ကြီးကလည်းအရမ်းသဘောကောင်းပြီး ခလေးလေးတွေ ရဲ့စိတ်ကြိုက် ၀န်ဆောင်မှု့ပေးနေတယ်လို့ခံစားရလို့ပါ။
၈ပုံကတော့ ပညာရှင်ဆန်ပါတယ်။ ၁၃ကတော့ ဒစ်စနေလန်း မှာများလားလို့….အဲတော့ဓါတ်ပုံပညာရှင်က ဘူလေးလဲ? .၁၈ကတော့ အရိပ်ကျပုံကိုတော့သိပ်စိတ်တိုင်းမကျပေမယ့်ကြိုက်တယ်။ ၂၀လည်းကြိုက်ပါတယ်။
ပုံ ၄ ကို အသဲကြားက မဲတစ်ပြားပေးခဲ့တယ်ဗျာ..
ပန်းခူးနေတဲ့ မိန်းကလေးကို သွားကူပေးချင်သလိုတောင်
ကိုရင့် နှလုံးသားက အရမ်းနူးညံ့တော့ မိန်းကလေးတွေ
မနိုင်မနင်းထမ်းပိုးထားတာ မြင်ရင့် စိတ်က အလိုလို
ကျန်တဲ့ ပုံတွေအားလုံးလည်း ကောင်းပါတယ်…
မျှမျှတတလေး ဖြစ်သွားအောင်ရယ်ပါ… :D :D
15 ရယ်5ရယ် ကြိုက်မိပါကြောင်း….. ဒါပေမဲ့ vote ပေးခဲ့တာကတော့…
5 ကိုကြိုက်တာက၊ ကလေးတွေရဲ့သရုပ်ပီပြင်တာရယ်၊ ဈေးသည်သဘာဝပေါ်လွင်တာရယ်၊ အဲ့လိုအရုပ်ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်မျိုးကို တန်ဖိုးထားလေးစားမိတာရယ်၊…..
15 ကို ကြိုက်တာက ငှက်တွေကိုကျွန်တော်ချစ်တာရယ်၊ အမြဲငှက်လွှတ်တက်တဲ့ အကျင့်ရှိတာရယ်၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ငှက်သည်၊ ဦးပိန်တံတား တွေနဲ့တန်ဆာဆင်ထားတာကိုကြိုက်တာရယ်၊ (ငှက်သည်ကို အနီးကပ် ရိုက်ပြပြီး၊ ငှက်ပျံတက်သွားတာကို ပြနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိကြောင်း….
15 ကို ကြိုက်တာက ငှက်တွေကိုကျွန်တော်ချစ်တာရယ်၊ အမြဲငှက်လွှတ်တက်တဲ့ အကျင့်ရှိတာရယ်၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ငှက်သည်၊ ဦးပိန်တံတား တွေနဲ့တန်ဆာဆင်ထားတာကိုကြိုက်တာရယ်၊ (ငှက်သည်ကို အနီးကပ် ရိုက်ပြပြီး၊ ငှက်ပျံတက်သွားတာကို ပြနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိကြောင်း….)
ဓါတ်ပုံ ပညာအကြောင်း တစ်ခုမှ နားမလည်တော့ ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးက အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကို သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံ (၅) ကိုတော့ ပိုပြီးသဘောကျမိတယ်။ ခလေးလေး လက်ညှိုးထိုးပြီး မေးမြန်းနေပုံရတာရယ်၊ အဲဒီ့လူကြီးက သူ့အလုပ်ကို လုပ်ရင်းနဲ့ ခလေးတွေ မေးသမျှ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြောပြနေပုံလေး ပေါ်နေတာရယ်၊ နောက်ပြီး Green Rose ကိုယ်တိုင်က အဲဒီ့အရုပ်လေးတွေ လုပ်တာကို ထိုင်ကြည့်နေရတာကို သဘောကျလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ပုံ (၅) ကို Vote လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပုံနံပါတ် ၁၈ ကို မဲပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။
နေပူထဲမှာနေရင်း ခေါ်သံလေးများကြားရလေမလားနားစွင့်နေတဲ့ ” ဈေးသည် “။
အဲလိုခံစားပြီးမဲပေးခဲ့တာပါ။ ကျန်တာတော့ ဓါတ်ပုံပညာကိုနားမလည် တာမို့….။
ပုံတွေအားလုံးကိုကြိုက်တာပါ။ တစ်ပုံချင်းစီဟာသူ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ အားလုံးကောင်းပါတယ်။
ပုံ ၂ နဲ့ ၂၃ ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးပုံက ၂ ပါ။
ဆြာ၊ ဆြာမများအားလုံးကိုလေးစားလျှက်၊ MG အတွက် ဂုဏ်ယူလျှက်။
ဆုများကို ဗုတ်စနစ်ထက် စီစဉ်သူများနှင့်သူကြီးက ကြီးကြပ်ပြီးသာရွေးစေလိုပါကြောင်း။ ဗုတ်စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းက လူကြိုက်များခြင်းသာရှိပြီး ဓါတ်ပုံကောင်းများ အမှတ်မရမှာကိုစိုးမိပါကြောင်း
နံပါတ် ၃ တော့သဘောကျသလိုပဲ
စွယ်တော်ဖြူလေးတွေနဲ့ ဟိုလူရယ်နေတာ ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူး ဒါပေမယ့်
ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ ကြည့်လိုက်ရင် အရင်ဆုံးသတိထားမိတာပဲ
တကယ့်ကို ဖျတ်ကနဲ တွေ့ရတဲ့ ရုပ်ပုံပဲ
၂၀ ထဲက ရှမ်းပြောင်းဖူးလည်းကြိုက်တယ်
ငှက်ကလေးပြောတာကို ထောက်ခံပါသည်…..ဓါတ်ပုံ၏ အရည်အသွေး၊ အယူအဆ၊ ဖော်ပြလိုသည့် အကြောင်းအရာ၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ကိုက်ညီမညီ….စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ….အရွေးခံရတဲ့ပုံဟာ ဘာကြောင့်ရွေးချယ်
သဂျီး poll တင်တာ ပုံ ၂၃ တစ်ခု ကျန်နေတယ်။
အလှဆုံးပုံကိုပြောပါဆိုယင်တော့ အမှတ်စဉ် ၄ လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်
အကြိုက်ဆုံးပုံကိုပြောပါဆိုယင်တော့ အမှတ်စဉ်၁၈ ပါ ဓါတ်ပုံကိုပန်းချီဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်
နံပါတ် ၄ ပုံကို သာမန်ကြည့်ရင် လှပါတယ်..(ကောင်မလေးလဲ ချောတာကိုး).. ဒါပေမယ့် ခရမ်းရောင်များလွန်းတယ်.. ဖိုတိုရှော့ သုံးထားသလားမသိ… နောက်ဆုံး အမယ်အိုပုံကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ.. သဘာဝကျလွန်းလို့ .. ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တောသားဆိုတော့ ငယ်စဉ်တုန်းက အဲ့လို ဆိုင်မျိုးလေးတွေကို အမှတ်ရမိလို့ .. မုန့် အုပ်ခလေးတို့ .ခေါက်မုန့် တို့ ဆိုရင် အဲလိုလုပ်ကြတာ.. ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော
မြန်မာစံတော်ချိန်နှင့် အီလေးဆွဲသောအကျင့်ပေါင်းလိုက်၍ ဓာတ်ပုံပို့ ဖို့ နောက်ကျသွားပါသည်။ အခုမှ နောင်တရလို့register လုပ်ဖြစ်လိုက်တော့တယ်။ ရွာသူအသစ်ပါရှင်။
၂ နဲ့ ၅ ကို အကြိုက်ဆုံး… သို့ပေသိ ဓါတ်ပုံအမှတ် ၂ ကို မဲပေးသွားဗာသီ။ ဘုရားနားနီးဒေါ့ ကုသိုလ်များ ရမလားလို့…။
ပုံ (၈) ကိုအားပေးလိုက်တယ်ဗျာ..
နလပိန်းတုံးမို့ ခံစားမှုနဲ့ ရွေးလိုက်တယ်..
လိုတိုရှင်း နဲ့ ကြည့်မိတဲ့သူကို ခံစားမှု တခုခု ရစေသလား လို့
ဆိုးတာတခုက ဈေးဗန်းပေါ်မှာ အရိပ်တွေ လွှမ်းနေတာပဲ
နောက်တခုက တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ လည်းရှိထားသားးးး
ko gyi86 says:
ပုံ ( ၄ ) က ဈေးသည် ပန်းရောင်းတာလား …. ပန်းလိုက်ခူးနေတာလား .. ကောင်မလေး ပုံဆိုလို့ ချောချော လေး ၁ ယောက်ပဲ တွေ့တယ်.. ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာ အကြံကတော့ မဆိုးပါဘူး..စိတ်ကူးကောင်းပါတယ်…
နံပတ် 4,7,9,17ပုံတွေက ကြည့်ရတာ အေ၇ာင်သွေးတော်တော်လေးလှတယ် ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမသိဘူးနော် ဂေဇက်မိသားစုနေနဲ့ ပြောကြည့်တာနော် နံပတ် 1,3,15,16,20,21,22,23အဲ့ပုံတွေကတော့ ဈေးရောင်းတာ သဘာဝကျတယ် တကယ့်မျက်နှာလေးတွေကလည်း ဈေး သည်ပီသတယ် 23ပုံကတော့သဘာဝကျဆုံးပါဘဲ တကယ့်ကိုရွာထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာ/မ တွေများကြီးပါဘဲ အားကျတယ် ကိုယ်သာမရိုက်တက်တော့ ပြိုင်ပွဲကို အားဘဲပေးပါ့မယ် ။
သည်၁ပုံကတော့ ဘယ်သူ့လက်ချက်လည်း ဆိုတာ
အားလုံး သိပီးသားမို့ ..ခွစ်တစ်ဆိုက်ဇ် လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်…
သဂျီးပုံ ဗုတ်တဲ့လူ ရှိသေးသနော..
သဂျီးမင်း ကိုယ်တော်တိုင်များလား မဆိုနိုင်…
(သဂျီးကတော် လေဒီခိုင် ကတော့ အနုပညာသမား မို့ ..သဂျီးလက်ရာ
ဒီဇိုင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ယောက်ဆီက လက်ရာ အနေနဲ့
စဉ်းစားရင် ဘယ်လိုမှ ကို ကျေနပ် အားရစရာမကောင်း..
ပြချင်တဲ့ မိန်း ဆပ်ပဂျက် ဈေးသည် က ဟိုဘက်လှည့်နေ..
မဆိုင်တဲ့လူက ကင်မလာကိုကြည့် အဲ ..ရောင်းကုန်က အပြည့်မပါ..
(အပြည့်မပါတာ ပြဿနာ မဟုတ်သေး..) ပါတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကျ မဲနေ ..
အင်း … စနပ္ပ ရှော့ ကနေ စမတ်ရှော့ဖြစ်ဖို့ …
၁။ သည်ပုံကို ဟော်ရီဇင်တယ် မရိုက်ဘဲ ..ဗာတီကယ် ရိုက်ရင်
ပြချင်တာ ပိုပါမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
၂။ ခုဟာက ဈေးသည်ရဲ့ ၇၀ဒီဂရီလောက် စောင်းပြီး ရိုက်ထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ရှေ့တည့်တည့် မဟုတ်တောင် ၄၅ လောက် ၃၀ လောက် ဒီဂရီ ချိုးပီး ရိုက်ရင်
၃။ အိုင်းလယ်ဗယ် ကရိုက်ရမယ် လို့ အမြဲ မတွေးပါနဲ့ …
ပင့်ရိုက်တာ တခါတလေ လိုကောင်း တတ်သလို အပေါ်စီးက ဘာဒ့် အိုင်းဗျူးက
ရိုက်တာလည်း တခါတခါ အမြင် ပိုဆန်းပါတယ်။
၄။ ပူပေါင်း ၁လုံးလောက်ပဲ ပါချင်ပါပါစေ .. ဈေးသည် ရဲ့ မျက်နှာပေးရယ်
လက် အနေအထားရယ် .. သူ ကိုင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ က ဒေါင့်ဖြတ်မျဉ်းတွေ ဖြစ်တာမို့ ..
အဲ့ဒါတွေ အသားပေးပြနိုင်ရင် .. ပို အသက်ဝင်မယ့် ပုံဖြစ်မှာပါ …။ ..
ဒါက ခုထက် ပို ဇွမ်း ဖို့ ပြောတာပါ..
၅။ ပူပေါင်းနောက်မှာ ရဲတိုက်ကြီး တ၀က်တပျက် တွေ့နေရတယ်…
အဲ့ဒါဂျီး ပေါ်အောင် ထည့် ရိုက်နိုင်ရင်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိမှာပါ …။
ဘယ်လိုနေရာမှာ ဘာရောင်းတဲ့ ဈေးသည် ဆိုတာ ပိုပေါ်လွင် သွားတာမို့..
၀ိုက် တဲ့ မက်သတ်ပါ …
၆။ ဈေးသည်ကို ဈေးဝယ်သူ လာတဲ့အချိန် စောင့်ရိုက်ရင်လည်း
ဈေးရောင်းနေတဲ့ မြင်ကွင်းမို့ ..ပို မို အသက်ဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ညာဘက်လက်က မစ်ကီမောက်စ် ကိုခွဲကိုင်ထားလို့ ..ကွယ်နေတဲ့လူရဲ့နောက်မှာ
ဈေးဝယ်သူ ရှိနေမလား တောင် မဆိုနိုင်ပါ …။
၇။ ဈေးဝယ်သူဟာ ကလေး ဖြစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကလေးရဲ့.. အရုပ်အပေါ်ထားတဲ့
ခံစားချက် မျက်နှာ ဈေးသည်ရဲ့ ရောင်းကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀ယ်သူအပေါ်ထားတဲ့မျက်နှာ
ကို ဖော်ပြနိုင်ရင် … အတော်လေး ကောင်းမှာပါ…။
၈။ ဒါဟာ ကန်းဒစ် ဒါ့ပုံ အမျိုးအစား ဖြစ်လို့ …ကျနော် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ဆပ္ပဂျက် မဟုတ်တဲ့
အတွက် ဝေဖန်တာ ကျန်နိုင် ချော်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက် အားဖြည့်ရရင်တော့
ကန်းဒစ် ကျင့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ..ဆူညံတဲ့ စည်ကားတဲ့ ..လမ်းဘေးဈေး ..တရုတ်တန်း
လိုနေရာမျိုးတွေ ..သွားပြီး လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်..
သင်္ချာလေးရေ … ရေတခွက်လောက် ….။
ဒါမျိုး တခြားပုံတွေကို လုပ်ပေးဘို့ တောင်းဆိုပါတယ်
ပျမယ် ဆိုတာချည်းဘဲ …
လက်ရာရှင် ဘယ်သူမှန်း သိနေတဲ့ပုံပဲ ပြောပါရစေဦးဗျာ…
ခုနေတုန်း ကျန်ပုံတွေ လိုက်ပြောရင် ကျနော် ပရီဖားဖြစ်တဲ့ အတိုင်း
သဂျီးပုံကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ..ဟီဟိ..
သူကြီး ပုံက သိသာ လို့လားဗျ …။
ဇတ်လမ်းအမှန်က… ဘေးကပါလာတဲ့..သမီးပိပိက.. အတင်းဝယ်ခိုင်းမှာစိုးလို့.. ခိုးရိုက်တာဖြစ်ကြောင်း..။
ကြိုက်တာကတော့ အများကြီးပဲ ..
ဒါပေမယ့် နံပါတ် ၈ ကို ဗုတ်ခဲ့ဒယ် ..
လူကို အဓိက မပြဘဲနဲ့
ရောင်းတဲ့ ဝယ်တဲ့ ဈေးသည်ပုံစံကိုပဲ ပြထားတာ မိုက်တယ် ..
ဒီပုံက ကျုပ်ကြိုက်တဲ့ ပုံမျိုးပဲ …
ထို့ကြောင့် ဗုတ်ခဲ့ပါဒယ် ….
ဇဂါးမစပ် ..ဈေးသည် ဆိုတာနဲ့ ..အကုန် ခေါင်းရွက်ဗြတ်ထိုး
နဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည် တွေချည်းပဲ
ရိုက်လာဂျတယ်… ဂယ်ပါပဲ …လေဘာဒယ်အေ…
ကျုပ်သာဆို ပါချင်ကို ရှေ့က တစ်ရှူးဝေတဲ့ ငတိမလေးဒွေတို့
အီဇာဂါယာ က စားပွဲထိုးမလေးဒွေတို့ ..
မာဆွတ်ရှေ့က စကီလေး ဒွေတို့ …
ဟန်းဆက်ရောင်းတဲ့ မီနီ စကတ်လေးဒွေ တို့ …
ရိုက်ပါတယ်… ဘယ့်နှယ့် ..
ခညားတို့ဂျာ …ကျုပ် ဘာကြိုက်တတ်လဲ မသိတာလည်း မဟုတ် ….
မဗုတ် ဘူးဗျာ ..မဗုတ်ဘူး ..
၁ပုံမှ မဗုတ်ဘူး …
ဟဲ့ မိဂီ မဗုတ်နဲ့ တစ်ပုံမှမဗုတ်နဲ့ ညည်းပြောထားတယ်နော် ညည်းကမဗုတ်ဘူးလို့ …… ကိုယ့်စဂါး ကိုတည်ပစေ ……….
ရိုက်ကားရိုက်၏ မရခဲ့တာတွေ အများကြီး တော်ရေ့။
ဆူးလေဘက် သွားရိုက်တုန်းက စတိုးဆိုင် တစ်ဆိုင်က ဒစ်စကောင့်ချတာကို အရောင်းသမားက လမ်းဘေးမှာ မိုက်နဲ့အော်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ကုန်ပစ္စည်းကို မြှောက်ပြပြီး ရောင်းနေတာကို သွားရိုက်ခဲ့သေးတယ်။ ပုံမကောင်းတာနဲ့ မတင်ဖြစ်တာ။
ရိုက်ခဲ့တာတွေ အားလုံးပြရင် တစ်ယောက်တည်းနဲ့တင် ပုံ ၂၀ ကျော်တယ်။
ပုံ (၂၁) ကို အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ။ ယနေ့လိုခေတ်ကြီးထဲမှာ အလွယ်လမ်းကြောင်းကို မလိုက်ဘဲ ဘ၀ကို အရှုံမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်နေတဲ့ သရုပ်ကိုပေါ်လွင်နေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကျန်ရှိသော ပုံများကိုတော့ မဝေဖန်လိုတော့ပါ…။
နံပါတ် ၂ နဲ့ နံပါတ် ၁၈ ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဗုတ်လိုက်ပါတယ်။
….ဓါတ်ပုံ တွေ အကုန် လှပါတယ်….ကြိုးစားပမ်းစား စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရိုက်နိုင်သူ တွေကိုလည်း ချီးကျူး မိပါကြောင်း …..
လာမယ့် June လအတွက် .. “ချစ်စရာ့ အရွယ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ပါ။ ပုံ ကြိုရှာနိုင်အောင် .. လို့ရယ်ပါ။
ချစ်စရာ့အရွယ်.. ဆိုတာ ဆယ့်ခြောက်နှစ် သမီးလေးဒွေကို